14 Jolay 2017: Namangy ny Toby Pouru St Remy (France) ny Filoha FLM mivady sy ny mambra ny Birao Foibe FLM | Fiangonana Loterana Malagasy
14 Jolay 2017: Namangy ny Toby Pouru St Remy (France) ny Filoha FLM mivady sy ny mambra ny Birao Foibe FLM
by admin170723 · 23 juillet 2017
Nanatrika sy nandray anjara tamin’ny Fanokanana ny mpiandry tao amin’ny Toby FLM Pouru Saint-Rémy (France) ny Filohan’ny FLM, Pastora Dr RAKOTONIRINA David sy ny mambra ny Birao Foibe FLM tamin’ny alalan’ny solotenany, Ramatoa TOROMARE, Tonia lefitry ny FLM. Io Toby zanaky ny Tobilehibe Ankaramaza io no Toby Fifohazana tokana ivelan’i Madagasikara, araka ny nanendren’i Jesosy Kristy azy tamin’ny alalan’i Mama Volahavana Germaine Nenilava mpanompony. Tao amin’ny Fiangonana St WALFROY no nanatanterahana io fotoana io.
Nandray fitenenana tamin’io andro Fanokanana io ny Filoha FLM: nilaza ny momba ny tsy fahasalamany nandritra ny iray volana izy: « aretina nampahia izay tsy nahazoana niditra am-piangonana akory », hoy izy, ary nijoroany ny fanasitranan’i Jesosy Kristy azy ka nampahatsiahiviny tamin’izany ny tenin’Andriamanitra ninoany manao hoe: « Tsy ho faty aho, fa ho velona ka hitory ny asan’i Jehovah » Salamo 118:17
Nanao fananarana tamin’ny Fiangonana koa izy tamin’io andro io: Nampahatsiahiviny hodinihintsika ny Didy fahefatra -« Manajà ny rainao sy ny reninao mba ho maro andro ianao ao amin’ny tany izay omen’i Jehovah Andriamanitrao ho anao » Eksodosy 20:12 – izay mirakitra Teny fikasam-pitahiana, sy ny Didy fahavalo -« Aza mety ho vavolombelona mandainga hanameloka ny namanao » Eksodosy 20:16 – sy ny heviny araka ny fampianaran’i Dr Martin Lotera hoe « tsy ny hanameloka ny namanao fa ny hanala tsiny azy » no tokony ataontsika, hoy izy. Nanantitra izy ny tsy tokony hanaratsiana olona: « ialao ny fanaratsiana » hoy izy. Nampahatsiahiviny manokana tamin’izany ireto Tenin’Andriamanitra ireto: Lio.6:42 « Aza mijery ny sombin-kazo eo imason’ny namanao fa alao aloha ny andry eo amin’ny masonao », hoy ihany izy.
Mbola nijoroan’ny Filoha FLM ihany koa tamin’io fotoana io fa « sampy moderina« , hoy izy, ny « framasoneria » sy ny « ilominatia ». « Na ny sampy moderna na ny sampy nentim-paharazana dia samy mampisaraka amin’i Jesosy. Tsy afaka miaraka ny FANEKEMPINOANA marina manaiky an’i Jesosy ho Tompo – I Kor.12:3 – sy ny fanompantsampy toy ny « framasoneria » sy ny « ilominatia ». Koa raha izaho sy ny ankohonako izay nisafidy hanompo an’i Jesosy, Jos.24:15, dia tsy hanompo andriamanitra hafa miaraka amin’ny fanompoantsampy na nentim-paharazana na moderna! ». Miantso anareo rehetra hatoky ny TENY FIKASANA sy ho velona amin’ny FINOANA MARINA! » Hoy Pastora Dr RAKOTONIRINA David, Filohan’ny FLM.
06 Jolay – 12 Jolay 2017- Nandray anjara tamin’ny fankalazana ny faha-500 taonan’ny Reformasiona tany Wittenberg (Allemagne) ny Delegasiona Loterana Malagasy notarihin’ny Filoha FLM.
Previous story 06 Jolay – 12 Jolay 2017- Nandray anjara tamin’ny fankalazana ny faha-500 taonan’ny Reformasiona tany Wittenberg (Allemagne) ny Delegasiona Loterana Malagasy notarihin’ny Filoha FLM.